एनआरएनएमा विभाजन ल्याएर के चाहन्छ नेपाली कांग्रेस?
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ९औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि प्रत्यासी थिए वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त र तात्कालिन उपाध्यक्ष कुल आचार्य। व्यवसायीक साझेदारसमेत रहेका पन्त र आचार्य मिल्ने साथी पनि थिए। आचार्यले पन्तविरुद्ध उम्मेदवारी दिन्छन् भन्नेमा कतिपयले विश्वासै गरेका थिएनन्। आचार्यले संघको ८ औं महाधिवेशनमा कुमार पन्त र डा. बद्री केसीको कांध चढेर जमुना गुरुङविरुद्ध चुनाव लडेर उपाध्यक्ष पद हात पारेका थिए।
बाबाराजेश्वरी थापा ३१ भाद्र २०७८ बिहीबार ४ मिनेट पाठ
आज भाद्र महिना कृष्ण पक्षको औँसी तिथि, बाको मुख हेर्ने दिन अर्थात पितृ सम्मान दिवस। कर्म दिने पिता या बाको महिमा स्मरण गर्ने र सम्मान प्रकट गर्ने विशेष दिन।
सुवास न्यौपाने २२ भाद्र २०७८ मंगलबार ११ मिनेट पाठ
प्रकृति आफैमा धेरै सुन्दर छ। तर हामीले त्यसलाई दूषित बनाइरहेका छौं।
समीर शाही २२ श्रावण २०७८ शुक्रबार ६ मिनेट पाठ
मानिसले मानिसमाथि अपराध गर्दा दण्डसजाय भए जस्तै प्रावधान हुनुपर्दछ। त्यस्तै प्रावधान मानिसद्वारा प्रकृतिमाथि हुने सामुहिक बलात्कार सम्बन्धमा कठोर दण्डसजाय खोई ? हाम्रा साझा घर भत्काएर उजाड बनाउने जघन्य अपराधी तथा दोषीहरुलाई पाता कसेर कठघरामा उभ्याउने कानूनी प्रावधान कहिले आउने ?
नागरिक २० श्रावण २०७८ बुधबार १५ मिनेट पाठ
साउनका थुप्रै समाचार लेखियो। मेहन्दी लगाएका थुप्र्र्र्रै हातका बुट्टेदार तस्बीर खिचियो। तर भक्तकुमारीको हातमा पोतिएको साउनको हिलो अहिलेसम्म देखेको मेहन्दी हातभन्दा उत्कृष्ट लागेको छ।
उपेन्द्र लामिछाने ५ श्रावण २०७८ मंगलबार २ मिनेट पाठ
उपेन्द्र लामिछाने १ श्रावण २०७८ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
मानवी पौडेल ३० असार २०७८ बुधबार ७ मिनेट पाठ
आफ्नै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस
भारतसित नझुकेर वर्तमान संविधान जनतामा समर्पित गर्ने सुशील कोईरालालाई संविधान पिता त भनिन्छ तर यै संविधानको पटकपटक बलात्कार गर्ने कम्युनिस्टको खिलाफ राजनीतिक लडाइँ लड्ने आट समेत आउँदैन।
मनिष रेग्मी २२ असार २०७८ मंगलबार ६ मिनेट पाठ
सावित्री नेपाल १९ असार २०७८ शनिबार २ मिनेट पाठ
असारमा ननिभेको आगो!
मध्य असारको यो क्षणमा मुलुकभर पानी दर्किरहेको छ। तर एमालेभित्र सल्केको अविश्वासको आगो भने अझै निभ्न सकेको छैन। सामान्य आगो भए यो धेरै पहिल्यै निभिसक्थ्यो तर अहंमको आगो एक असारले त के हजारौं साउनले पनि निभाउन सक्दैन।
उपेन्द्र लामिछाने १८ असार २०७८ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
जनताले भोगिरहेको महामारीको चासो नगरी नेताहरु भने आफूलाई परेको महामारीको मात्र चिन्तामा छन्। यो बेला राष्ट्रपतिको चिन्ताभन्दा बढी राष्ट्र हितको चिन्तामा लागेर देशलाई बचाउनुपर्ने नेताहरु चार दिशातिर फर्केर तमाशा देखाइ रहेका छन्, नाटक, नौटंकी प्रदर्शनी गरिरहेका छन्।
हरिसुन्दर छुकां १३ असार २०७८ आइतबार ३ मिनेट पाठ
हामीले जति लैंगिक समानताको कुरा गरेपनि तबला वादनको क्षेत्रमा पुरुषहरुलाई भन्दा महिलालाई बढी संघर्ष गर्नु परेको देखिन्छ । जसरी विवाह पूर्व महिलाहरुले तबलाको साधनमा यथेष्ठ समय दिन सक्षम भएका हुन्छन, विवाह पश्चात त्यति धेरै यथेष्ठ समय दिन नसकेको पाईन्छ । यसमा केहि मात्रामा परिवारको पनि असन्तुष्टी हो की भन्न सकिन्छ ।
सीता भण्डारी ९ असार २०७८ बुधबार ४ मिनेट पाठ
यति बेला मान्छेका मनहरु फाँटेका छन्। कोरोनाको महामारीमा बाढी पहिरोले ‘नुनुचुक’ छरेको छ।योगका क्रियाले आत्मालाई परमात्मासंग जोड्ला नजोड्ला त्यो बुझ्न कठिन छ। तर सरकारले मुश्किलमा परेका जनतालाई सन्तुलितरुपमा राहतदिने हो भने जनताका फाँटेका मनहरुको योग हुने छ। अर्थात समाज फेरी जोडिने छ।
उपेन्द्र लामिछाने ७ असार २०७८ सोमबार २ मिनेट पाठ
रोनोल्डोले पत्रकार सम्मेलनको क्रममा कोकाकोलाको बोतललाई पन्छाएजस्तै जनताले असफल नेताहरुलाई कहिले पन्छाइदिने होला ? अनि कोकको रंगजस्तो मन भएको नेतृत्वको ठाउँमा पानीजस्तो संग्लो मन भएको नेतृत्व कहिले छान्ने होला?
उपेन्द्र लामिछाने ६ असार २०७८ आइतबार २ मिनेट पाठ